DAAWO:- Madaxwaynaha Puntland oo markii ugu horreysay kashifay sirta ku aasan kufsiga sii baahaya iyo dadka soo abaabula + Meelaha laga soo abaabulo.
April 16, 2019 Xafiiska Puntland Faallooyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Somalia, Wararka Maanta 2
Madaxweynaha dowladda Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni oo xalay hadal u jeediyay jaaliyadda Puntland ee waddanka Imaaraadka Carabta, ayaa shaaciyay in xukuumaddiisu guddi xaqiiqa-raadina u saartay cidda soo abaabusha kufsiyada ku soo badanaya degaannada Puntland.
Madaxweynaha ayaa sheegay in kufsiga iyo dilka is xambaarsan ee lagula kacayo gabdhaha da’ada yar, uu yahay dhaqan-xun oo hadda soo kordhay, una baahan in baaritaan dhab ah lagu sameeyo cidda soo abaaabusha,si tallaabo adag looga qaado.
“Waa daahiro cusub oo baaritaan dhaba u baahan, marka waxaan saarnay guddi xaqiiqada soo raadiya, marka arrintaasi waxay u baahantahay in aan si qoto dheer u baarno, cid kasta oo ka dambaysana tallaabo adag laga qaado” ayuu yiri Deni.
Sidoo kale, wuxuu sheegay in dhammaan kiisaskii kufsiga ee Puntland ka dhacay ay gacanta ku hayaan hay’adaha amniga iyo dembi-baarista, qaarkoodna mar hore loo gudbiyay maxkamadaha, islamarkaana cid walba ciqaabta ay mudaysato lagu qaadi doono.
halkaan hoose kadaawo
Sool iyo sanaag see loo difaci hadii shaqsiyaaad kufsi sameeyay. Oo.lahayo degdeg wax loga qaban wayay. Waxaa kutalinlaHaa. Maxamuud saleebaan. Kursiga siiya dhulbahante. Madaxweynaha si dhulkooda dawlad ahaan uxiraystaan. Madaxweynaha aan waxba xorayn karin. Nagadaaya. Mardanbe kufsiga yaan lsidka malin magaca darood puntland harti waa d ceebayseen 13 sano oo wada socda.
Kufsi gudi loo saaro tanaa u horeysa. Waar maad tiirka Soo joojisaa intaad heysaan ood tusaale uga dhigtaan inta danbe KU waabtaan?
Nin noolow maxaa aragti kuu laaban.